Warbixinta kooban ee Af-hayeenka khaaska ee Madaxweynaha JSL Muuse Bixi Cabdi Akhriyey Maalinnimadii Axda Waxay aheyd mid wax u dhimaya Hanaanka iyo Hogaanka Dawladnimada JSL? • Oodweynenews.com Oodweyne News
Waxa ka muuqday Warbixinta koobneyd ee Af-hayeenka, Madaxdweynaha JSL Shalay Axdii uu ,Akhriyey inay aheyd mid mugdi weyn oo ka shakigiisa iyo layaab kii sa ba leh ! Kuma darin hadii ay tahay Hab-cusub oo Madaxweyne Muuse Bixi Cabdi curiyeey oo ka qayb ah Siyaasadiisa iyo Hababka uu doonaayo inuu Dalka ,ku hago,kuna hogaansho .
Meesha mugdiga weyni ku jira waxa weeye waxa Af-hayeenku yidhi: Wafti balaadhan oo Khaliijka Carabta, ka socda ayaa Madaxweynah Qaranku Md Muuse Bixi qaabilay. Waxayna Waftiga Khalijka Carabtu raali-galin ka bixiyeen hadalkii uu yidhi Wasiru-dawlaha Arimaha debada ee Khaliijka Carabtu ee shakiga iyo u qaadan waaga ku dhaliyeey Ummada JSL walin hadal heyntiisi iyo qaada dhigisi si weyn bulshadu isugu dhiib dhibayso ama isu la wadaagayso .
Waxaan Caqliga saliimka ah aanu qaadan karin rumaysan karina ayaa loo dhiibay Inan ka dhalinyarada ah ee ku Magcaaban Af-hayeenka gaar ka ah ee Madaxweynaha JSL. Ila hada Ummada Jamhuuriyad Somaliland ee caadiag ahi waa yaabsan tahay waxa Axda Maalinnimadeed Warbixinta ka soo yeedahay Aqalka dalka looga arimyo ee Madaxtooyada .
Waxayna tahay ta yaabka iyo Amag-kaaga keentey in inaan la arag wax wafti lagu tilmaami karo oo Dalka Garoonkiis, Diyaaradu ka haadan kan soo degaan laga soo galbiyeey amaba loo sii galbiyey .
Ta kale side ayeey u dhici karta ayaado arinta muranka iyo shakiga abuurtay ay taagan tahay? Xukumada Muuse Hogaamiyaha ka yahay lagu eedeynaayo inay Qaranka ,Hog iyo Hadaan u qoday xukumadii kulmiye hore ta Maantana, iyadu ciida ku sii rogtay u qarin karaan wax eedaha ka difaaci kara Ummadan qalbiga iyo quluubta u dejin kara . Halka waxa markiiba kaga soo boodaya inaan wax Wafti ah oo dalka yimi aanu jirin . Waxa intaa dheer maxay tahay in la arki kari waayo wafti balaadhan ?waa sida uu hadalka u yidhi inanka Af-hayeenka ku magcaabiniye oo ay ula hadli- waayeen Warbaahinta maxaliga ee Dalka ka howl gasha ee baahida weyn ee Ummadu u qabto dhab ahaanshq arimaha la xidhiidh emaaradka u taqaan sidii ay uga ha qabtiri lahaayeen ama ugu soo gudbin lahayeen sida dhab ah ee wax u jiraan una dhaceen .
Waxay dhacdani ay Qaranka ku tahay dhabar jab iyo dumis iyo yasid jiritaank Ummada iyo Dalkaba!, hadiiba Wafti heer Caalami ah oo Dalka soo gaadhay dalka ay donaan ha ka socdaan waxay donaan ha u socdaane aaney la Wadaagi karin Warbaahinta madaniga ah ee Dalka gudihiisa ka howl gasha mid Dawladu leedahay iyo mid gaar loo leeyahay ba. Si kasta ha ahaate waxa iyadun aan wali suurto galin in Xukumadu Muuse hogaamiyo aaney mawquf cad ka qaadan sidii ay cadeyn cada Ummada u soo hordhigi laheyd ugan gar-bixi lahayd arimaha fartu ku godan tahay ee kow ka tahay Berbera Dekedeed balaadhinteed iyo Xerada ciidamada ee la yidhi waxa la siiyey loona hibeeyey Emaaraka carabta .
Xukumadu waxay ka gows adeygaysa inay tidhaahdo waxa na soo gaadhay warqad ay Emaaradku Email noogu soo direen oo odhaneysa waxii Madaxtooyadu u soo qoratay Af-hayeen gaarka ah ee Madaxweynaha ee Maalinimadii Axda warbixinta yar akhriyeey . waxayn xukumada yar buur burto waxii email Emaarku ugu soo qoreen waa sida ugu dhow ee wax u dhici karan ay un badan tahay . Waxa Xukumadu warka uga dhigeysa Ummada waa mid marag u ah waxa la hadoodilaayo iyo halka emaraadku ka joogo Jamhuuriyad Somaliland iyo qadiyadeed. Sida aan filayo Xukumadii Muuse hogaanka u hayo isa sheegatay iyadaan cidba sheegin . waxayna tidhi waad aragtaan waxay tahay runtu ama diida ummaday ama yeel! Oo aniga waxb hayga sugina ileen waad I aragtaane.